बलत्कार - Sano Aawaj
१२ मंसिर २०७८, आईतवार१२ मंसिर २०७८, आईतवार१२ मंसिर २०७८, आईतवार by sanoaawajNo Comments
जेलमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका पिताले जेलमै आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेर भागे
Breaking news 1, Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, बलत्कार
काठमाडौं। हत्याको आरोपमा जेलमा आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका एक पिताले जेलभित्रै आफ्नै नाबालिग छोरीलाई बलात्कार गरेर भागेको घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेशको जोधपुरमा भएको घटनामा पुलिसले आरोपी पिताको खोजी गरिरहेको छ । टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार आरोपी जोधपुरको खुला जेल (ओपन एयर जेल)मा कैद थिए । उनीमाथि हत्याको आरोप थियो र उनी आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका थिए ।आरोपीले आफ्नी नाबालिग छोरीलाई आफूसँगै राखेका थिए । केही समयसम्म उनकी पत्नी पनि जेलमा उनको साथमै बसेकी थिइन् । पछि उनकी पत्नी उनलाई छोडेर गइन् । छोरी भने पितासँगै जेलमै बस्दै आएकी थिइन् । बुधबार पीडित छोरीले आफ्नी आमालाई फोन गरेर पिताले आफूलाई बलात्कार गरेको बताइन् । छोरीको कुरा सुनेपछि आमाले तत्काल यसबारे पुलिसलाई सूचित गरिन् । पीडितकी आमाले रेओदार पुलिस स्टेशनमा उज...
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार१० मंसिर २०७८, शुक्रबार१० मंसिर २०७८, शुक्रबार by sanoaawajNo Comments
आफ्नै बाबुले गरे छोरीको बलात्कार
Breaking news 1, Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, अपराध, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, बलत्कार
एजेन्सी : राजस्थानको धौलपुरमा एक नाबालिकाको बलात्कार भएको छ। आठ कक्षामा अध्ययनरत ती बालिकालाई उनकै पिताले बलात्कार गरेका हुन्। बलात्कृत बालिकाले एक पत्र लेख्दै आफ्नो स्कुलका प्रधानाध्यापकलाई घटनाबारे जानकारी दिएकी थिइन्। ती प्रधानाध्यापकले तत्काल बाल कल्याण समितिलाई यसबारे जानकारी दिए। हाल प्रहरीले पीडित बालिकाका पितालाई पक्राउ गरेको छ। बालिकाले आफ्नो पिताले आफूमाथि सधैं दुर्व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाएकी छिन्। आमाले यसको विरोध गर्दा उनलाई कुटपिट गर्ने गरेको र आफूमाथि निरन्तर कुदृष्टि राखेको बालिकाले बताएकी छिन्। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ।...
अ’श्लि’ल भिडियो देखाई १३ वर्षीया बालिकालाई….
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, बलत्कार
पर्वत। बालयौन दुरुपयोग गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। १३ वर्षीया बालिकालाई मोवाइलमा रहेको अ’श्लि’ल भि’डियो दे’खाई यौ’न दु’र्व्य’व’हार ग’रे’को अभियोगमा पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिका -४ बस्ने २८ वर्षीय आचार्य थरका एक युवालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार गएको सोमबार अपरान्ह ४ :०५ बजेको समयमा आचार्यले बालिकालाई एकान्त ठाउँमा लगी भिडियो देखाई बालयौ’न दु’र्व्य’व’हार ग’रे’को भन्ने पीडित बालिकाको बुबाको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि बालयौ’न दु’रुपयोग सम्बन्धी मुद्धा अन्तर्गत जिल्ला अदालत पर्वतबाट पाँच दिनको म्याद थपको अनुमति लिएर आवश्यक अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।...
सामूहिक बलात्कार भएपछि युवतीले ट्रेनभित्रै गरिन् आत्महत्या
Breaking news 2, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, बलत्कार
एजेन्सी । ट्रेनका सफाई कर्मचारीले ट्रेन सफा गर्दै गर्दा एक युवतीको श व भेटेका थिए। ट्रेनको माथिल्लो बर्थमा १९ वर्षीया युवतीले आ त्मह त्या गरेकी थिइन्। प्रहरीले उनको साथमा मोबाइल फोन भेटाएको थियो। मोबाइलको जाँच गर्दा युवती गुजरातको नवसारीको वासिन्दा भएको खुलेको छ। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा एक डायरी पनि भेटिएको छ। उक्त डायरीमा युवतीले लेखेअनुसार आ त्मह त्याको २ दिनअघि उनी रातको समयमा वडोदरामा उस ठाउँमा जाँदै थिइन् जहाँ डेरामा बस्दै आएकी थिइन्। उक्त बेला २ रिक्सावालाले उनको अपहरण गरेका थिए। त्यसपछि वडोदराको वैक्सीन ग्राउण्डमा लगेर उनको बला त्कार गरिएको थियो। एकजना बसवालाले उनलाई सहयोग गर्दै घरसम्म लगेका थिए। घटनाको २ दिनपछि युवतीले साथीलाई भेट्न जाने भनेर परिवारलाई जानकारी गराई वलसाडका लागि निस्किएकी थिइन्। गुजरातको क्वीन ट्रेनमा बिहान उनको श व डिब्बामा फेला प...
Breaking news 1, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, ताजा अपडेट, बलत्कार
पाकिस्तानको सिन्धु प्रान्तमा एक बालकलाई यौ’ ‘न दु’र्व्य’वहा’रपछि पा’श’विक तरिकाले ह’ ‘त्या गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । ती बालक शुक्रबार साँझ सिन्धु प्रान्तबाट हराएका थिए । उनको शब शनिबार दिउसो एउटा खाली घरमा फेला परेको थियो । गुरु नानकको जन्मजयन्ती मनाउने क्रममा ती बालक ह’राएका थिए । ‘हामी सबै जना गुरु नानकको जन्म दिनको कार्यक्रममा व्यस्त थियो । बालक कसरी ह’रायो भन्ने बारेमा पत्तो नै पाएनौ,’ बालकका एक आफन्तको भनाई उदृत गर्दैै पाकिस्तानी समाचार संस्था एक्सप्रेस ट्रिव्युनले जनाएको छ । ११ वर्षीय बालकको ह’ ‘त्याअघि उनलाई यौ’ ‘न दु’र्व्य’व’हा’र भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । ह’ ‘त्यामा सं’ल’ग्न रहेको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । सिन्ध प्रान्तमा एक महिनामा बालकको यौ’ ‘न दु’र्व्यव’हा’र भएको यो दोस्रो घटना हो । पाकिस्तानमा हिन्दू र अन्य अल...
Breaking news 1, Breaking news 2, Nepse Update, अपराध, ताजा अपडेट, बलत्कार
काठमाडौं: महोत्तरीकी अमृता सदाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरी, भंगहा नगरपालिका-५ सीतापुरका २४ वर्षीय विपिन मण्डल र धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-३ पर्सा पकडियाका ४२ वर्षीय मनोज यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिएका छन्। मृतक अमृता भंगहा-२ बखरी टोलकी दलित समुदायकी हुन्। ३५ वर्षीया अमृतामाथि सदालाई रातभरि बलात्कार गरी हत्या गरेको अभियोग लगेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘मेला हेर्न जाउ भनी झुक्याएर राति ९ बजे लगे। गाउँ नजिकैको चौरीमा पुर्‍याएर दुवै जनाले पालैपालो करणी गरे। अचेत अवस्थामा भेटिएकी अमृताको उपचारको क्रममा निधन भयो’ एसपी दिनेश आचार्य। बुधबार आरोपी विपिनलाई उनकै गाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने मनोजलाई सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका-५ पक्र...
आफ्नै बहिनी बलात्कार गरेको आरोपमा दाजु पक्राउ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले आफ्नै बहिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक दाजुलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको ईस्मा गाउँपालिका-३ दौवा बस्ने १९ वर्षीय कृष्ण मुखिया रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार १९ बर्षिय कृष्ण आफ्नै १३ वर्षीया बहिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा मंगलबार साँझ पक्राउ परेका हुन्। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यो पनि, संसारकै विरही गीत, जसलाई ६२ वर्ष प्रतिबन्ध लगाइयो मानिस प्रेममा हुँदा रोमान्टिक गीत मन पराउँछ । मन दुख्दा दुःख र विरहका गीत सुन्न मन पराउँदछ । कतिपय यस्ता गीतहरू हुन्छन् जसलाई पटक-पटक सुन्न मन लाग्दछ । यस्ता केही गीत-संगीत हुन्छन् जुन सुनिसकेपछि मानिसहरू अकारण नै दुःखी हुन्छन्, छटपटाउँछन् ।त्यस्तै एउटा गीत थियो, जुन सुनेर धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरे । उक्त गीतलाई मानि...
सामूहिक बलात्कार भएपछि युवतीले गरिन् आत्महत्या
Breaking news 1, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, ताजा अपडेट, बलत्कार
गुजरातमा एकपछि अर्को बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। दिपावालीको दिन सफाई कर्मचारीले ट्रेन सफा गर्दै गर्दा एक युवतीको शव भेटेका थिए। ट्रेनको माथिल्लो बर्थमा १९ वर्षीया युवतीले आत्महत्या गरेकी थिइन्। प्रहरीले उनको साथमा मोबाइल फोन भेटाएको थियो। मोबाइलको जाँच गर्दा युवती गुजरातको नवसारीको वासिन्दा भएको खुलेको छ। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा एक डायरी पनि भेटिएको छ। उक्त डायरीमा युवतीले लेखेअनुसार आत्महत्याको २ दिनअघि उनी रातको समयमा वडोदरामा उस ठाउँमा जाँदै थिइन् जहाँ डेरामा बस्दै आएकी थिइन्। उक्त बेला २ रिक्सावालाले उनको अपहरण गरेका थिए। त्यसपछि वडोदराको वैक्सीन ग्राउण्डमा लगेर उनको बलात्कार गरिएको थियो। एकजना बसवालाले उनलाई सहयोग गर्दै घरसम्म लगेका थिए। घटनाको २ दिनपछि युवतीले साथीलाई भेट्न जाने भनेर परिवारलाई जानकारी गराई वलसाडका लागि निस्किएकी ...
१३ वर्षको उमेरमा आफन्तबाटै कोठीमा बेचिएकी युवतीको कथा
Breaking news 1, Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, बलत्कार
१३ वर्षको उमेरमा आफन्तबाटै भारतको कोठीमा पुर्‍याइएकी एक बालिका सात वर्षपछि घर फर्केकी छन्। भारतको दिल्लीस्थित कागज कारखानामा काम लगाउने भन्दै लगिएकी ती बालिकालाई कोठीमा पुर्‍याइएको थियो। कक्षा ७ मा पढ्दै गरेकी ती बालिकालाई माइजू नन्दकली र उनकै दुई छोरी तारा र ममताले दिल्ली पुर्‍याएका थिए। बालिकाका बुवा सानैमा बिते। भाइबहिनी सानै थिए। आमाको दुःखलाई नजिकबाट देखेकी उनी काम पाउने र पैसा कमाउने प्रलोभनमा परिन् । ‘काम कागज कारखानामा गर्ने हो। राम्रो कमाइ हुन्छ। आमाको दुःख पनि कम हुन्छ भनेपछि लोभिएँ,’ बिहीबार प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी उनले भनिन्, ‘दिल्ली पुर्‍याएकै भोलिपल्ट दिदीहरूले कोठीमा ध ‘न्दा गर्न पठाए।’ उनका अनुसार तारा र ममताले दिल्लीको जिपी रोडमा को’ठी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले त्यही कोठीमा १५ महिना ना’रकीय जीवन बिताइन्। ‘दैनिक ४० जनासम...
१७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरी फरार यी
Breaking news 1, Nepse Update, अपराध, ट्रेन्डिङ, बलत्कार
सिरहा :- सिरहामा एक किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । लहान नगरपालिका १४ की १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा २४ वर्षीय शिवा पासवानविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा उजुरी परेको छ । पीडित किशोरीमाथि बिहीबार बलात्कार गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि उजुरी परेको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख डीएसपी डाक्टर तपन दाहाले जानकारी दिए । पीडित किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र आरोपितको खाजीकार्य भइरहेको जनाको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।...